လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်ဖက်များ – Infra Capital Myanmar ReEx
ReEx Capital Asia အကြောင်း ReEx Capital Asia သည် သန့်ရှင်းသာ စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့် အတိုင်ပင်ခံအဖြစ် အာရှပစိဖိတ်ဒေသများတွင် အထူးပြုထားပြီး၊ စင်္ကာပူတွင် ရုံးချုပ်ထားရှိကာ၊ အမေရိကန်၊ ဥရောပ၊ နယူးဇီလန်နှင့် ဖိလိပိုင်တို့တွင် ကိုယ်စားပြုခြင်း ခံရပါသည်။ ReEx Capital Asiaသည် အာရှပစိဖိတ်ဒေသများတွင် ပြည်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်နှင့် စွမ်းအင်အကျိုးရှိစွာအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ များအတွက် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များ ဆောင်ရွက်ပေးရန် အထူးပြုထားခြင်းဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၁၅ နှစ်အတွင်းတွင် ကုမ္ပဏီသည် အမေရိကိန်ဒေါ်လာ ၂၀ ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိ လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
InfraCo Asia Development Pte. Ltd. (“InfraCo Asia”) isadonor-funded, commercially managed infrastructure development company headquartered in Singapore. It seeks to create viable infrastructure investment opportunities that balance the interests of host governments, local communities and domestic and international private sector investors.
Infraco Asia funds early stage, high risk project development activities, and brings world class development expertise through its team of highly experienced and qualified developers, with the aim of reducing the entry costs for private sector infrastructure investors. Check out their website at www.infracoasia.com or connect to them on LinkedIn.